Isilimela 12, 2018 admin
$20M kaEtere meyili evela apps Ethereum kakubi silungiselelwe
Ngokutsho Chinese ngokuqinileyo yokhuseleko intanethi Qihoo 360 Netlab, imigewu ndibe $20 million ngo kaEtere evela rigs zemigodi Ethereum kakuhle abaqwalaselweyo kwizicelo zeqela lesithathu. Iingcali ekuqaleni, siqinise bathi kokuhlaselwa intanethi target iindawo Ethereum angakhuselekanga kwi Internet.
inkampani ye crypto ukuba kuluhlu London Stock Exchange
Inkampani entsha onceda abantu zam cryptocurrencies ngokusebenzisa phones kunye neekhompyutha usebenzisa isevisi ibhengeze izicwangciso ukudwelisa kwi London Stock Exchange, kokokuqala ukuba exchange.
Argo Blockchain uthe unethemba ukukhulisa £ million 20 kuhlu kwaye ulindele ukuba liqingqwe kwi £ 40 million. Argo uthi uya kuba inkampani yemigodi crypto wokuqala wokujoyina istock market eLondon.
imboni Iinkonzo zeMali uchitha $ 1.7B kwi blockchain
Ishishini leenkonzo zemali uchitha $1.7 billion nezikali ngonyaka kwi zasasazwa, Ngokutsho komnye umphengululi Greenwich Associates.
Uphando lubonisa-mali esichithwe blockchain landa 67% kunyaka ophelile, nomnye 10 iibhanki kunye nezinye iinkampani ingxelo inkcitho engaphezulu $10 million. Ngokufanayo, inani labasebenzi abasebenza amaphulo blockchain kabini ngonyaka ophelileyo.
Richard Johnson, likamongameli lombutho Greenwich Associates Market and Technology uthe iikota ezintathu ngaphezu yeeprojekthi okwangoku phantsi uphuhliso kulindeleke ukuba kwakgqitywa kwisithuba seminyaka emibini.
CFTC kudinga ukuba ukutshintshiselana crypto ukwabelana data zorhwebo
I-US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ucele ukuba yokutshintshiselana eziliqela imali crypto – Bitstamp, Coinbase, itBit and Kraken – data zorhwebo exchange ukumisela ukuba ingaba yokuntlokothiswa obuchaphazela imarike ze crypto.
Nangona uphando i CFTC iselelona kwibakala lokuqala, kubonisa ukuba nabalawuli babe nomdla kakhulu ekubekeni ukutshintshiselana crypto phantsi kweliso. Ukuthi ngqo, i CFTC liphanda ukuba imakethi bachatshazelwa nezenzo zoshishino njengoko spoofing okanye ingaba barhwebi eningena ukunyuka kwamaxabiso ngumntu ezinkulu.
iibhanki Korean uceba ukusebenzisa blockchain ukuqinisekisa ID loMthengi
Iqela zebhanki lesizwe eMzantsi Korea liceba balubumbe inkqubo blockchain-based yokungqinisisa ID yeebhanki zorhwebo zasekhaya.
Inkqubo entsha, BankSign, uya kunikela iibhanki lasekuhlaleni ukhetho endaweni inkqubo yokungqinisisa ID ekhoyo ethe ndawo eminyaka eMzantsi Korea.
Le nkonzo entsha ID blockchain, eya kufumaneka ukuze zombini intanethi kunye zebhanki mobile, uphawula enye imigudu kuqala kwiibhanki zorhwebo eMzantsi Korea ukuba benze izicelo blockchain ekhoyo abathengi jikelele.
Ingxelo Daily Market Kraken for 11.06.2018
$212M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Coinbase wenza 43% ka yayo 2017 lwengeniso December
Post Previous:Blockchain News 11.06.2018
Post Next:Blockchain News 13.06.2018
EyeKhala 19, 2018 e 5:14 PM
Riley Doig uthi:
EyeThupha 2, 2018 e 8:16 AM